चिकित्सा शिक्षा विधेयकः केसीको जित भएको सत्तापक्षको दाबी, धोका दिइएको काँग्रेसको ठहर - TV Annapurna
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति तोकिएको छ । कांग्रेसले भने विपक्षमा मत दिएको छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका फरक फरक धारणा आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई धोका दिएको बताएका छन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेपछि थापाले यसरी अगाडि बढ्नुथियो भने सहमति किन गरेको भनेर प्रश्न गरे ।
अप्ठ्याराहरु छन् तर, मुल रुपमा सरकार सहमतिको पक्षमा छ विश्वास गर्दै आएको थिएँ । त्यही हिसावले वातावरण बनाउने प्रयास पनि गरेको हुँ । एकछिन अगाडिसम्म पनि के लागेको थियो भने माननीय मन्त्रीजी एक्लैलाई गाह्रो भइरहेको छ तर, उहाँ यो गर्न चाहनुहुन्छ । त्यसैले मैले सुरुमा पनि भनेँ कि समितिको सदस्यको भूमिका मात्र होइन, यो राम्रोसँग टुंगियोस् भन्ने चाहना भएकाले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा पुर्‍याउनुपर्छ । सरकार पक्कै पनि यो विधेयक पारित गर्दा सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भन्ने लागेको थियो ।
नेकपाका सांसखद भट्टराईले भने डा. केसी मात्र होइन, अरुले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग पनि सम्बोधन भएको बताए । ‘डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति तोडमोड गर्‍यो कि भन्ने शंका लागेको छ, त्यो होइन’ उनले भने, अब विगतमा जस्तो बाटाबाटै सम्बन्धन बाँडेर मेडिकल शिक्षालाई ब्यापार बनाउने कुरा यो विधेयकले सम्पूर्ण ढंगले रोकेको छ ।’
यसका लागि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी दिन नपाउने, काठमाडौंभित्र १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नपाउने र सम्बन्धन पाएकाले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भने खारेज हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
उनले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था उपत्यका बाहिरको हकमा लागू नहुने प्रावधानको बचाउ गरे । भट्टराईले भने, ‘यो विधेयकले सम्बन्धन दिन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिएको छ । उसको स्वायत्तता हो ।’
साथै सरकारले अनुमति दिएर अर्बौ लगानी गरेको भन्दै उनले आशयपत्र लिएर मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई रोक्न नहुने बताए । मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेशमा अर्बौ रकम गइरहेको भन्दै उनले भने, नेपाली लगानीकर्तालाई सिस्नु पानी हानेर लखेट्ने राष्ट्रघाती कुरा हो ।’
समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा संसदबाटै गोविन्द केसीको जित सुनिश्चित गरेको भट्टराईको दाबी छ । ‘उहाँले भने अनुसार कानून बनेको छ । ससदले उहाँलाई जिताइसक्यो, पुलमाला लगाइसक्यो,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँले पनि यो संसदको सर्वोच्चता र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्यथा ब्याख्या गरेर भड्काउनेतिर जानु हँदैन ।’